Haiti: Ny olana nateraky ny fanampiana iraisam-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Haiti: Ny olana nateraky ny fanampiana iraisam-pirenena
Voadika ny 22 Janoary 2010 7:57 GMT
Dimy andro aty aorian'ny horohoron-tany namotika ny renivohitry Haiti, Port-au-Prince sy ireo tanàna hafa toa an'i Leogane sy Jacmel, dia mbola sarotra ho an'ny mpamonjy voina sy ireo mpitsabo ny mamonjy ireo mponina sisa tsy maty.
Na izany aza anefa, tsy avy amin'ny tsy finiavana hanampy eo amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena anefa izany tsy fahatomombanana izany, fianakaviana iraisam-pirenena izay avy hatrany dia naneho ny fiaraha-mientany hanampy, araka ny fanazavan'ny AlterPresseHaiti [Fr]:
[…] Ny fitsidihana nataon'i Ban Ki Moon narahan'ny fitsidihana nataon'ny sekreteram-panjakana amerikana Hillary Clinton, nandritra ny ora maromaro tany Haiti ny 16 janoary lasa teo no naneho ny fiaraha-mientana amin'ny filoha René Préval sy ireo vahoaka any an-toerana ary koa maneho ny fandraisana andraikitra ataon'i Washington.
Ho an'yn filoha frantsay Nicolas Sarkozyindray dia nialohavan'ny fitsidihana nataon'ny sekreteram-panjakana miahy ny fifandraisana, Alain Joyandet, tamin'ny 14 janoary ny azy, nanehoany ny fiarahan'i Frantsa amin'ny “vahoaka Haitiens niharam-boina”.
Nanao fitsidihana tampoka tany an-toerana koa ny filoha dominikana Leonel Fernandez tamin'ny 13 janoary nanehoany ny fiarahany amin'ny filoha Préval sy ny vahoakany.
Tsy afaka manamora ny fahasarotana iainan'ireo mpamonjy voina anefa ireny fitsidihana notanterahan'ireo mpitondra fanjakana ambony ireo. Ny bilaogy martinike Bel Balawou no milaza ny fomba fitantanana ny seranam-piaramanidina ao Port-au-Prince [Fr]:
Haiti: fiaramanidina feno fanampiana averina fotsiny, olona am-polony maro voatery matory eny amin'ny lalan'ny fiaramanidina satria tsy afaka mandeha, fanampiana an-taoniny maro miandry ny fizarana azy satria ratsy ny fandrindrana: nipoaka ny hatezerana teny amin'ny seranam-piaramanidin'i Port-au-Prince tamin'ny asabotsy.
Indro ny ampahany amin'ny taratasy nalefan'ny Médecins Sans Frontières manamarina izay voalazan'ny Bel Balawou's :
Port-au-Prince/Paris /New York, 17 janoary 2010—Médecins Sans Frontière (MSF) mangataka ny hamelana ireo fiaramanidina mitondra fitaovam-pitsaboana sy fandidiana hipetraka ao Port-au-Prince hahafahana mitsabo ireo maratra marobe mila fandidiana maika. Tokony homena ireo fiaramanidina mitondra fitaovana sy mpitsabo ireo ny fahazoan-dalana voalohany hiditra ny seranam-piaramanidina.
Any amin'ny bilaogy hafa toa an'ny Potoprincipe [Fr] ny fanazavana:
Nomen'ny governemanta Haitiana an-dry zareo amerikana ny fitantanana ity seranam-piaramanidina ao an-drenivohitra Port-au-Prince ity, seranana potiky ny horohoron-tany ny talata lasa teo.
Kanefa fiaramanidina marobe mitondra fanampiana no tsy afaka miditra ao.
BelBalawou manome fanazavana bebe kokoa momba ity toe-javatra ity [Fr]:
Niteraka olana ara-diplomatika ny fanomezana ny fitantanana an-dry zareo amerikana taorian'ny namerenany ny fiaramanidina frantsay nitondra trano voarafitra ho toeram-pitsaboana any ambanivohitra, kanefa tena tsy ampy mihitsy ny fikarakana ireo maratra.
Ao amin'ity soratra ity ihany, Potoprincipe manazava fa firenena hafa koa no niaina toe-javatra tahaka izany [Fr]:
Vaovao mari-pototra no voarain'ny AFP fa fiaramanidina iray an'ny tafika arzentina nitondra fitaovam-pitsaboana sy fitaovana fanadiovana rano no mbola tafahitsoka ao amin'ny seranam-piaramanidina any Saint-Domingue, 120Km, tamin'ny asabotsy lasa teo, fiaramanidina meksikana 2 voatery niandry “2 andro sy tapany” tany amin'ny Repoblika Dominikana, izay vao tafapetraka tao Port-au-Prince, fanampiana 40 taonina avy any Pérou no nalefa an-tanety avy any Saint-Domingue ny sabotsy lasa teo.
manoloana izany fanankianana rehetra izany dia naneho ny heviny ny fanjakana amerikana. Bel Balawou mitatitra ny resaka natao tamin'ny manam-boninahitra amerikana iray[Fr]:
‘Notapahana niaraka tamin'ny ONU sy ry zareo Haitiana ny fanapahan-kevitra,’ hoy Merten, izay nahatsapa ny tena zava-dehibe: ‘mazava ho azy fa misy ny vahaolana’, hoy izy nanaiky. Notsindriany mafy koa ny nahavitan'ny amerikana namerina ny fampiasana ity seranam-piaramanidina ity tao anatin'ny 1 andro na dia nisy fahapotehana aza ny trano fitaratra mibaiko ityseranana ity nandritra ny horohoron-tany.
Niteraka fanontaniana any amin'ireo mpitoraka bilaogy ity fahasarotana ara-politika ity, Bel Balawou no milaza heviny ny amin'ny ny tokony hitantanana ireo fanampiana iraisam-pirenena ireo [Fr]:
Apetraka amin'ny mpiasa avy any amin'ireo firenena manome fanampiana ny fitantanana azy ireny amin'ny ankapobeny. Mba hahatomombana ny fampanantenana ho amin'ny fivelarana dia ilaina ny fanoloana ireny olona ireny ho olona avy any an-oerana ihany, araka ny nambaran'ny mpanoratra amerikana iray izay mahafantatra tsara an'i Haiti.
Ny tahotra ny amin'ny ampitson'i Haiti, mikasika ny fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ny fanampiana dia nolazaina tao amin'ny radioa Kiskeya, izay namoaka lahatsoratra mitondra ny lohanteny hoe “Mizotra mankany amin'ny fanjanahana indray ve?” [Fr]:
Na misaona na potika ny ankamaroan'ny intelligentsia-tsika. Ireo firenena vahiny mitondra fanampiana tsy manontany ny hery velona any an-toerana intsony ny amin'ny hitantanana ny fizarana ny sakafo. Banga i Haiti.
Ao amin'ity lahatsoratra ity ihany, ny mpanoratra Harold Isaac no manindry ny fiantsoana ireo fianakaviam-be Haitiana:
Eto ny fifanomezam-potoana mana-tantara: fotoana tsy manam-paharoa hamohazana ireo hery velona rehetra miaraka amin'i Haiti, anatiny sy ivelan'ny firenena, hananganana fiaraha-monina mahafatrapo.
Tsidiho ny Global Voices Haiti Earthquake page ho an'ny tohin'ny vaovao rehetra.
Tantaran'ny Tahiti farany
‘Maohi Lives Matter': Manameloka ny andrana nokleary ataon'ny Frantsay ny mpanao fihetsiketsehana any Tahiti
Mediam-bahoaka 10 Aogositra 2021
Mediam-bahoaka 15 Novambra 2018
Fiji 21 Janoary 2014